अनुसन्धानले भन्छ, महिलालाई पुरुषसाथी भन्दा कुकुर सँग सुत्दा मिठो निन्द्रा लाग्छ! || तातोखबर डट कम
अनुसन्धानले भन्छ, महिलालाई पुरुषसाथी भन्दा कुकुर सँग सुत्दा मिठो निन्द्रा लाग्छ!
तातोखबर 2018-12-13 15:56:43 सूचना / प्रविधि
,भारत महाराष्ट्र वर्धा मंसिर २७ गते । हामी सबैकालागि निन्द्रा महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक जीवका लागि निन्द्रा वास्तवमा अपरिहार्य छ । राम्रो स्वास्थ्य र सुन्दरताको लागि जसरी हामीलाई पोषक तत्व आवश्यक हुन्छ। त्यसरी नै निन्द्राको महत्व पनि स्वास्थ्य सँग जोडिएर हुन्छ। दैनिक जीवन यापनकै सहजताको लागि पनि निन्द्रा धेरै उपयोगी हुन्छ । यदी शरीरको लागि लामो उमेर चाहिन्छ भने हरेक मानिसको लागि दिनको कम्तिमा पनि सात घण्टा सुत्न आवश्यक हुन्छ। धेरै काम र व्यस्त जीवनको कारणले मानिसहरु सुत्न पनि नभ्याउने भएका छन् । कसरी राम्ररी सुत्ने रु जसले गर्दा बिहान हामीलाई स्वच्छ भएको महसुस होस् । सुत्ने बेलामा पनि धेरै कुराले अवरोध पुर्याएको हुनसक्छ।
महिलाहरूका लागि पनि धेरै कुराले अफ्ठेरो पारेको हुनसक्छ । क्यानडाको अलवेर्ता विश्वविद्यालयले गरेको एउटा अनुसन्धानका अनुसार यदि रातीमा राम्रो निन्द्रा हामी चाहन्छौँ भने हाम्रो सुताइलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । उक्त अध्ययन करिब ९ सय महिलामाथि गरिएको थियो । उनीहरूले सुत्ने तालिकामा पुरुषसाथी सँग र घरपालुवा जनावरहरू सँग सुत्दाको फरक बारे जानकारी लिइएको थियो ।
अनुसन्धानकर्ताको उदेश्य थियो कि विरालो, कुकुर अथवा मानिससँग सुत्दा कसले राम्रो सँग निन्द्रा लाग्न दिदैन् अथवा गुणस्तरीय निन्द्रा हुनबाट बञ्चित गर्छ । अनुसन्धानका अनुसार बेडमा कुकुर विरालोलाई भन्दा यदि मानिससँगको सुताईबाट पर रह्यो भने मिठो निन्द्रा हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । ५५ प्रतिशत सहभागीले कुकुरसँग सुत्दा मिठो निन्द्रा लाग्ने र त्यसले कुनै बाधा नहुने बताएका थिए । कुकुर जस्तै बिरालोले पनि मिठो निन्द्रामा बाधा नपुर्‍याउने ३१ प्रतिशत मानिसले बताएका थिए । यस्तै अप्सनमा ५७ प्रतिशतले मानिसले बाधा नपुर्‍याउने बताएका थिए ।
विमा व्योर्होनेमा सगरमाथा ईन्स्योरेन्स प्रा.लि अग्रस्थानमा
सिरहा, २८ पौष । सिरहाको लहानमा रहेको सगरमाथा ईन्स्योरेन्स प्रा.ली. ले द.........